आज असार ९ गते, कसको राशिफल कस्तो? « Dainik Online
प्रकाशित मिति : ९ असार २०७९, बिहिबार ६ : २५
आजको मितिः वि.सं २०७९ आषाढ ९ गते बिहीबार तद्अनुसार सन् २०२२ जुन २३ तारिख आषाढ कृष्णपक्षको दशमी तिथि। काठमाण्डौंमा सूर्योदय बिहान ५:११ बजे भयो र सूर्यास्त साँझ १९:०१ बजे हुनेछ।
आज कसको राशिफल कस्तो?
मेष – आज मन हर्षित तुल्याउने पाहुनाको आगमन हुन सक्छ। समय शुभ फलदायक छ। आयआर्जनमा पनि राम्रो दिन छ। केहि नयाँ काम गर्नको लागि परिवारजनको उचित सल्लाह आउने देखिन्छ। मनोकूलको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ। यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ। ऋण रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। मान–सम्मान प्राप्त हुनेछ।
वृष – काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । जोशजाँगर र हिम्मत बढ्नेछ। जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ।
मिथुन – आज अधुरो काम पूरा होला। पारिवारिक सुखले प्रफुल्लित भइनेछ। कृषि कार्य अघि बढ्नेछ। व्यवसायका लागि यात्राको सम्भावना पनि छ।
कर्कट–आज सजिलैसँग काम नबन्न सक्छ। काम बिग्रने र रुपैयाँपैसाको लेनदेन पनि खासै राम्रो छैन। मातृधनको उपयोगबाट लाभ उठाउन सकिनेछ। बन्न लागेको काम बिग्रन गइ मनमा चिन्ता बढ्न सक्छ। ठूलो सहयोगको आशा देखाउनेहरूले धोका दिन सक्छन्, सचेत रहनुहोस्। यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ। इष्टमित्रको साथ प्राप्त हुनेछ। प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ।
सिंह– दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ। वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ, तर यात्रामा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ र तर्क, विवाद र प्रतिस्पर्धाबाट लाभ हुने छैन।
कन्या – दिन एकदमै राम्रो छ । कामहरु सजिलै संग बन्नेछन् । आजको दिन प्रेमबल बढ्नेछ र भोगविलासको चाहना बढ्ला । रोकिएको काम बन्नुसँगै नयाँ काम पनि बन्नेछ । जाँगर बढ्ने देखिन्छ, आर्थिक लाभ पनि होला । आज कुनै नया कामको थालनी गर्नु भए राम्रै हुन्छ । यात्रामा सफलता हासिल हुनेछ ।
तुला – स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ, तर पेशागत रुपमा समस्या देखिन सक्छ । मुद्दा मामिलामा पर्न सकिएला ।अनावश्यक डर, वादविवाद हुन सक्नाले समय खासै राम्रो छैन होस राख्नुहोला । कुसैसँग झगडा पनि हुन सक्छ । वादविवादको सामना गर्नुपर्ला । आफन्तको सहयोग–समर्थन मिल्नेछ । रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता भने बढ्नेछ ।
वृश्चिक – आयस्रोत र आरोग्य वृद्धि हुनेछ । प्रेमपथमा प्रगति होला । सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ । दिदीबहिनी वा कुटुम्बका काममा सघाउनुपर्नेछ । मनमा दुविधा रहन सक्ने दिन छ । सामाजिक काममा नाम रहने छ, ब्यापार तथा जागिरमा दिन ठिकै छ । नयाँ कामको सुरुवात खासै राम्रो छैन । काममा सफलता पाउनुहुनेछ । सद्कर्म पथमा प्रगति होला । भाग्योदय होला । आफन्तको सहयोग बढ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्यमा सफल हुनुसँगै गीतसंगीतमा पनि आकर्षण बढ्नेछ । सन्तानसुख बढ्नेछ । आमोदप्रमोदमा रमिरहनु हुनेछ ।
धनु – आरोग्य बढ्नेछ । ऋण, रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । आफ्नै बल विवेकले कार्य गर्नु बेस रहला । नजिकका मित्रबाट विशेष सहयोग र सुख प्राप्त हुने देखिन्छ । साथै खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ। वैवाहिक जीवन सुखी हुने खालको दिन छ, यात्राको पनि योग रहेको छ । शारीरिक र आर्थिक हीत हुने काममा लाग्नु उचित रहला ।
मकर – आजको दिन परिश्रमअनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइएला । अप्रत्याशित लाभ हुनेछ, टाढाको यात्राको पनि योग रहेको छ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन्, मन त्यसै शान्त हुनेछ । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । साहसिक काम बन्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित कार्य बौद्धिक र रचनात्मक कार्य आदि क्षेत्रमा सफलता पाउनुहुनेछ ।
कुम्भ– सामाजिक कार्य सफल नै रहनेछ । प्रेम सम्बन्ध कसिलो होला । महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्ला ।
मीन – शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ । सामाजिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । विपरीत वर्गबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ।